NY FAMPIANARANA VAOVAO
Na iza na iza mandre ny teniko ka mankato azy dia hendry,sady manorina eo amboniny fototra izay natao tamin'ny vato. 1
Latsaka ny orana ary miakatra ny rano. Mamely ny trano ny rivotra mifofofofo, fa mbola mijoro izy: satria naorina eo ambony vato mafy.
Fa izay rehetra mandre ny teniko izay manome fiainana, ka mandà azy, dia manorina fototra eo ambonin'ny fasika. Latsaka ny orana, miakatra ny rano. Mamely ny trano ny rivotra mifofofofo, ary mianjera ny fototra. Mirodana ny trano, ary mahatsiravina ny fianjerany. 2
Nisy lehilahy roa niditra tao amin'ny tempoly mba hivavaka, ny iray mpiavonavona, mpanamari-tena, ny iray indray mpamory hetra malaza amin'ny ny tsy fahamarinany. Izao no vavaka nataon'ilay mpirehareha: " Misaotra Andriamanitra ô, fa tsy mba mpanota tahaka ny hafa sasany aho, indrindra fa itsy mpamory hetra mpamitaka izay hitako eo amin'ny zoron-trano itsy. Tsy mba namitaka mihitsy aloha aho e, na nijangajanga. Mifady hanina in-droa isan-kerinandro aho, ary omeko any amin'ny tempoly ny am-pahafolon'izay rehetra azoko.
"Fa ilay mpamory hetra nijanona tery aoriana tery tao an-tempoly, ary tsy nahasahy nampitraka ny masony any amin'ny lanitra raha nivavaka tamin'ny alahelo izy hoe: " Andriamanitra ô, mba mamindrà fo amiko mpanota tsy mendrika.
" Lazaiko aminareo fa ilay mpamory hetra, izay nahafantatra fa nila ny famindrampon'Andriamanitra, dia maivana ny fony niverina tany an-tranony, afaka tamin'ny ahiahy ary voavela heloka. Fa ireo izay manandratra ny tenany ao anatin'ny avonavony dia hampietrena, fa ireo izay manetry tena kosa dia hisandratra ambonin'ny fanahian'izao tontolo izao, ho amin'ny toerana ahazahoany fitahiana sy voninahitra.
Avelao hanatona Ahy na dia ny ankizy kely aza, aza tazoninareo izy. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia an'ny fo matoky tahaka ny azy; fa raha tsy manana finoana tahaka ny an'ny zazakely hianareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy. 3
Raha misy olona mifidy ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra, ho fantany mora foana raha avy amin'Andriamanitra ny fampianarako, na raha mitory ny hevitro fotsiny Aho. Tsy avy Amiko ny fampianarako fa avy amin'Ilay naniraka Ahy. 4
Mivavaka ao anatin'ny fahajambana izao tontolo izao. Farafaharatsiny amin'ny maha Jiosy antsika, fantatsika izay ivavahantsika; ary koa ny famonjen'izao tontolo izao dia nipoitra avy amintsika. Minoa Ahy: ho avy ny fotoana, ary efa tonga sahady izany, izay tsy hihazakazahan'ny olona te-hivavaka amin'Andriamanitra ho aty na ho ary, hitady ny toerana izay heverina misy an'Andriamanitra, milaza hoe: " Aty Izy! Eto no tokony hivavaka isika. "
Ny mpino marina dia hivavaka amin'Andriamanitra amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Mitady ireo izay manolotra izany karazana fanatitra izany amin'ny vavaka sy ny fiderana Andriamanitra Ray. Raha toa hianareo hijanona hangina dia ny vato mihitsy no hiantsoantso. 5
Efa novakianareo angamba fa raha noana ny Mpanjaka Davida sy ireo miaramilany, niditra tao an-tempoly izy ireo ka nihinana ny mofo masina natokana ho an'ny mpisorona, zavatra izay noràran'ny lalàn'ny fivavahana.
Raha toa hianareo mpianatra momban'ny lalàn'ny Hebreo, dia ho fantatrareo fa manitsaka ny Sabata ny mpisorona izay miasa ao amin'ny tempoly amin'ny andro Sabata, kanefa tsy manan-tsiny no fiheverana azy amin'izany . Lazaiko aminareo fa misy zavatra manan-danja lavitra noho ny lalàn'ny tempoly. Raha azonareo ny dikan'ilay soratra masina hoe: " Famindrampo no sitrako fa tsy fanatitra alatsa-drà ", dia nitsahatra tsy nanameloka ny tsy manan-tsiny hianareo . Fa ny Zanak'olona dia Tompon' ny andro, na ny Sabata koa aza.
Andao anie atao hoe latsaka ao anaty hady amin'ny andro Sabata ny biby anankiray izay ompinareo, moa tsy hanao izay azo atao rehetra ve hianareo hisintona azy avy ao? Tsy mihoatra lavitra noho izany ve ny vidin'ny ainareo? Mandeha ho azy aminareo ny fanaovana fotoana lavabe amin'ny Sabata ary ny fanarahana litorjia amin'ny fomba fivavahana, koa nahoana aza no manakiana Ahy hianareo raha manasitrana amin'ny andron'nyTompo Aho. Rahoviana vao hitsahatra tsy hitsara amin'ny fijery ivelany fotsiny hianareo ka hanomboka hanao fitsarana marina? Natao ho anareo ny Sabata. Fa tsy hianareo no natao ho an'ny Sabata. 6
Tonga amin'izao tontolo izao Aho mba hahiratra ny jamba, ary mba hahatonga ireo mirehareha ny amin'ny fahiratany ho tonga saina fa tahaka ny inona marina anie ny fahajamban' izy ireo.7
Sambatra izay mandre ny tenin'Andriamanitra ka manaraka azy. 1
Raha manao izany hianareo dia ho tahaka ilay mpanompo izay hita fa nanao ny tsara rehefa tonga ny tompony.2
Sambatra hianareo izay mametraka ny fitokisanareo rehetra amin'Andriamanitra, fa anareo ny fanjakan'ny lanitra.
Sambatra hianareo izay zatra amin'ny alahelo, fa homena fampiononona sy faherezana hianareo.
Sambatra hianareo izay manana ny fanetren-tena hiaiky izay zavatra ilainareo manokana, fa ho anareo ny tany rehetra.
Sambatra hianareo izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana, fa ho afa-po sy ho vokisana hianareo.
Sambatra hianareo izay mpamindrafo, fa hahazo famindrampo hianareo ho valin'izany.
Sambatra hianareo izay madio am-po, fa hahita an'Andriamanitra hianareo.
Sambatra hianareo izay mpampihavana, fa hantsoina hoe zanak'Andriamanitra hianareo.
Sambatra hianareo izay mikatsaka famonjena, fa ho tonga mponin'ny fanjakan'Andriamanitra hianareo.
Sambatra hianareo raha mijaly noho ny soketa sy ny fitenenan-dratsy ataon'ny olona anareo noho ny fanaovana ny sitrapoko. Mifalia, ary mibitaha amin'ny fifaliana, fa lehibe ny valisoanareo any an-danitra. Fa tahaka izany koa no nanenjehany ireo mpilaza ny marina malaza tamin'ny andro taloha. 3
Vao maika sambatra kokoa aza hianareo izay mino nefa tsy nahita Ahy, ary mitana ny finoanareo Ahy; sambatra ny masonareo fa mahita marina tokoa sy ny sofinareo fa mahare marina tokoa. 4
Manatona, hianareo rehetra izay notahian'ny Ray, mandovà ny fanjakana izay namboarina ho anareo hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. 5
NY HERIN'NY VAVAKA
Hatramin'izao mbola tsy nangataka na inona na inona amin'ny anarako hianareo, mangataha, dia hahazo hianareo, ka ho feno ny fifalianareo. 1
Mankany any amin'ny tranon'ny namanao amin'ny roa ambiny folo alina hianao, ary milaza izao: " Ampindramo mofo telo aho. Manam-bahiny aho, nandeha avy lavitra izy mba hamangy ahy, nefa tsy misy na inona na inona intsony ny fitehirizan-tsakafo ao aminay.
" Ary izao no valiny ho azonao: " Aza manelingelin'ahy amin'izao fotoana izao, azafady. Mihidy lakile ny varavarana, ary matory ny zanako. Tsy afaka mitsangana hanampy anao aho. " Lazaiko aminao, na dia tsy hitsangana aza izany namanao izany hanome mofo anao noho ny fisakaizanareo, dia farany izy hanaiky noho ny hamafisan'ny kirinao ka hitsangana hanome anao izay mofo rehetra ilainao.
Koa tohizo foana: mangataha, dia homena hianareo. Mitadiava dia hahita hianareo. Dondony dia ho vohaina varavarana hianareo. Fa izay rehetra mangataka dia hahazo, ireo izay mitady dia hahita, ary ho an'ireo izay mandondona, hovohaina midanadana ny varavarana. 2
Tany amin'ny tanàna iray izay, nisy mpitsara mafy fo nipetraka, izay sady tsy natahotra an'Andriamanitra no tsy niraharaha ny mpifanolo-bodirindrina taminy. Nisy vehivavy mpitondra-tena izay nipetraka tamin'io tanàna io koa, ary tsy nitsahatra ny nandaha-teny taminy mba hahazaoany ny rariny mikasika ny olona iray izay nampahory azy. Nodian'ilay mpitsara tsy fantatra izy nandritra ny fotoana lava, ary nandà ny hihaino ny fitarainany izy. Farany anefa hoy izy tamin'ny tenany ihany:
" Na dia tsy matahotra an'Andriamanitra aza aho, ary tsy misy hiraharahiako ny amin'izay fiantrana, ataoko izay hahazoan'ity mpitondran-tena ity ny rariny; satria mandreraka ahy izy amin'ny fitarainany tsy misy farany. "
Moa tsy hanome ny rariny ho an'ny olom-boafidiny, izay mitaraindraina Aminy andro aman'alina ve Andriamanitra? Hianao ve dia mieritreritra fa hanosika azy ireo Izy? Lazaiko aminareo: ataony izay hahazoan'izy ireo rariny, ary haingana! Kanefa izao no tena fanontaniana mipetraka ao anatin'ity tantara ity: " Rehefa miverina Aho, ilay Mesia, mba hahita olona maro eto ambonin'ny tany manana faharetana amin'ny finoana tahak'izany ve Aho? 3
Tsy miteny Aho akory fa tokony avelanareo ho latsaka anatin'ny lasitry ny fiverimberenana tsy misy dikany ny vavakareo. Izany no fivavakin'ny jentilisa, mieritreritra izy fa ho heno noho ny habetsaky ny vavaka ataony. Tsy tokony haka tahaka azy hianareo. Tsarovy fa fantatry ny Rainareo izay any an-danitra izay ilainareo na dia mbola tsy mangataka aza hianareo. 4
Nosoratan'i Isaia mpaminany hoe: " Fa ny Tranoko hatao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. "5
Mivavaha ary amin'ny Ray, izay mihaino ny vavaka farany izay mangingina indrindra ataonareo manokana ka hamalisoa izany am-pahibemaso; ary na inona na inona angatahinareo amin'ny Ray amin'ny anarako, hanome izany Izy. Raha ao Amiko no iainanareo ny fiainanareo, ka avelanareo hitoetra ao am-ponareo ny Teniko, angataho izay irinareo, fa homena anareo izany. 6
Sahala amin'izao atao rehefa mivavaka: Rainay izay any an-danitra, aoka heken'ny tany rehetra fa Hianao irery no Andriamanitra masina.
Aoka ho tonga hitoetra aty aminay ny fanjakanao, ary hatao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra.
Omeo anay ny mofo amin'ity andro ity mba hanohana anay, ary mamelà ny helokay, tahaka ny amelanay ireo izay nanao heloka taminay.
Arovy amin'ny fandehanana any amin'ny fakam-panahy izahay, ary afaho amin'ilay ratsy.
Fa Anao ny hery, sy ny voninahitra rehetra, mandrakizay. Ho tanteraka anie izany. 7
NY HARENA ANY AN-DANITRA
Iaino ny fiainanareo amin'ny fanaovana amin'ny hafa izay mba tianareo hataony aminareo.1
Indray andro izay nisy lehilahy mpanan-karena iray izay niakanjo volomparasy sy lamba rongony madinika tsara tarehy ary miaina ao anatin'ny fiohampampana.
Tamin'io tanàna io ihany nisy lehilahy tsy nanan-trano antsoina hoe Lazarosy izay nipetraka teo am-bavahady izay mankany amin'ny tranon'ilay mpanan-karena. Tsy mangataka izy, fa ny sombitsombiny izay latsaka avy amin'ny latabatr'ilay mpanan-karena ihany. Ny alika eny an-dalam-be ihany no mba namany, ary ireo no mijerijery azy.
Farany maty Lazarosy indray andro izay ary nentin'ny anjely eny an-tsandrin'i Abrahama. Tsy ela taorian'izay maty koa ilay mpanan-karena ary nalevina.
Nanopy ny masony feno fijaliana hiakatra izy raha tao anaty afo be , ary nahita an'i Abrahama tery lavitra tery, sy Lazarosy eo an-tsandriny. Niantsoantso mafy tamin'ny heriny rehetra izy hoe: " Abrahama ô, mamindra fo amiko,mba iraho ilay mpangataka Lazarosy. Asaivo hatsobony anaty rano ny lohan'ny fanondrony mba hampangatsiahahiny ny lelako, fa tena mijaly mafy aho ato anatin'ireto lelafo ireto."
Namaly azy i Abrahama hoe: " Tsarovy anaka, nanana ny zava-tsoa rehetra hianao tamin'ny androm-piainanao, Lazarosy anefa tsy mba nahalala afa-tsy fahoriana. Ankoatr'izay misy hantsana be mampisaraka antsika, mba tsy hahafahan'izay aty am-pita aty mankany aminareo ary tsy hahafahanareo koa miampita avy any mankaty aminay. "
Nony nandre izany ilay mpanan-karena dia nitomany: " Mba mitalaho ary aho ny handefasanao an'i Lazarosy ho any an-tranon-draiko. Manana rahalahy dimy aho ka tsy maintsy ilazany mialoha izy ireo, mba tsy amin'ity afo be ity koa no hiafarany. "
Izao no navalin'i Abrahama an'izany: " Manana an'i Mosesy sy ny mpaminany izy. Aoka izy hihaino an'ireo. "
"Fa izao anie e," hoy ilay mpanan-karena mandahatra, "tena azo antoka fa hibebaka izy ireo raha misy olona iray avy amin'ny maty mankany aminy. "
Hoy Abrahama namaly: " Raha tsy mibebaka noho ny tenin'i Mosesy sy ny mpaminany izy dia tsy ho resy lahatra na dia hisy olona hitsangana amin'ny maty hampitandrina azy aza. " 2
Tsy fahalalahan-tànana akory ny manome ho an'ireo izay afaka mamerina mora foana ny volanao. Na dia ny mahihitra aza hampindram-bola raha toa azony antoka fa ho voaverina daholo izany. Raha amiko dia izao: omeo ilay olona manatona anao fa tena misy maha tery azy, nefa tsy afaka hamerina ny volanao; ary aoka hianao hamindra fo, na dia misoloky anao aza izany olona izany. 3
Rehefa ny mahantra no manome dia manao lavitra noho ny mpanome manan-karena rehetra mitambatra izay manome izy satria manam-be. Fa ny mahantra dia manome avy amin'izay tena ilainy ary avy amin'ny fitiavana mazàna no anomezany izay tsy azony nampirimina.4
Ahoana ny hahasarotry ny fidiran'ny tia vola ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra! Moramora kokoa ho an'ny rameva ny misisika ao amin'ny vody fanjaitra, noho ny hidiran'ny mpanan-karena ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Kanefa, izay zavatra tsy hain'olombelona atao dia mihoatra noho ny azo atao raha amin'Andriamanitra. 5
Aza manangona harena ety ambonin'ny tany izay misy koroka sy harafesina manimba, ary izay misy jiolahy mamaky trano sy mangalatra. Fa angony any an-danitra ny harenanareo, izay tsy misy koroka na harafesina manimba azy ary tsy misy atahorana fa hisy mpangalatra na fihenan'ny sandambidiny. Fa izay misy ny harenareo dia ho any koa ny fonareo.6
Misy ny sasany tsy manao ny tsara raha tsy azony antoka fa ankasitrahan'ny olona mijery azy izy. Tsy mba hahazo valisoa avy amin'ny Rainareo izay any an-danitra izy ireny. Rehefa manome hianareo aza mba tahaka ny mpihatsaravelatsihy izay mampaneno lakolosy ao an-tempoly sy eny amin'ny arabe. Efa nahazo ny valisoany ny olona tahaka ireny.7
Aza avela ho fantatry ny tànanao havia akory izay ataon'ny tànanao ankavanana. Manomeza mangina ary any amin'ny miafina; fa hamalisoa anao eo imason'ny olona rehetra ny Rainao izay any an-danitra izay mahita ny zavatra tahak'izany.8
Mianara manome fa haverina be dia be aminareo mihoatra noho izay heverinareo izany, hampitomboina ary hitobaka be. Ary izay fatra hizaranareo amin'ny fahalalahan-tànanareo ihany no hahazoanareo ho famarana ny valisoa azonareo ho valiny.9
Indray andro izay niodina ny petra-bola nataon'ny lehilahy mpaman-karena iray ka niverina lasa nahazohany tombony be . Raha nieritreritra ny hareny izy dia hoy izy tao an-tsainy: " Inona re no hataoko amin'ireo tombony azoko e? ". Ary tonga tamin'izao fanapahan-kevitra izao izy: " Ho ravàko ireo tranoko efa antitra ireo dia hanorina lehibe noho ireo aho; dia hampirimiko ao daholo ny harenako rehetra ary holaniko ao ny tombony azoko. Ho afa-po aho no sady hanana harena izay haharitra taona maro. Holaniko amin'izay hazahoako aina ny androko, hihinana aho, hisotro ary hifaly.
" Fa hoy Andriamanitra taminy: " Ry adala! Tsy fantatrao angaha fa ho takina aminao anio alina ny fanahinao! Rehefa lasa hianao, ho an'iza ireo zavatra rehetra ireo?.
" Sahala amin' izany no hanjo an'ireo izay mitahiry harena ho an'ny tenany, fa tsy manan-karena amin'ny zavatra izay an'Andriamanitra. Inona moa ny tombotsoa raha mahazo izay rehetra azon' izao tontolo izao atolotra anao hianao, raha amin'ny fanaovanao izany no hahaverezanao ny fanahinao? Ary inona no homenao ho takalon'ny fanahinao, na ny toeranao any amin'ny fanjakana?. 10
FINOANA MAHAFINDRA TENDROMBOHITRA
Arakarak' izay finoanao, no ho raisinao koa.1
Maro no ho tonga amin'ny andro farany avy amin'ny vazan-tany rehetra, ary hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny mpanamarin-tena sy ny mpivavaka, izay nieritreritra fa izy no ho voalohany, nefa niaina tamin'ny fiainana tsy misy finoana, dia tsy ho tafiditra ao. 2
Raha misy roa mifanaiky ety an-tany, amin'ny finoana, na amin'inona na amin'inona izany dia ho tanterahin'ny Raiko izay any an-danitra ny fangatahany. Fa na aiza na aiza no misy roa na telo mivory amin'ny anarako, dia miaraka aminy Aho. 3
Hanaraka anareo izay mino ireto famantarana ireto: Handroaka demonia amin'ny anarako hianareo ary hiteny amin'ny fiteny vaovao. Tsy haninona anareo ny bibilava na ny zavatra mahafaty. Hametra-tànana amin'ny marary hianareo ary ho sitrana izy.4
Raha mitafy finoana kely tahaka ny voatsinampy hianareo dia hiteny amin'ny tendrombohitra hoe: "Mikisaha ary mianjera any amin'ny ranomasina."
Raha mino hianareo fa azo atao izany sady tsy manisy toerana ho an'ny fisalasalana, dia ho tanteraka izay angatahinareo sy izay baikonareo. Izany no hitenenako aminareo hoe: na inona na inona irinareo, rehefa mivavaka hianareo minoa fa ho azonareo izany, ary dia ho azonareo.5
Amin'ny fitarihin'ny Fanahy Masina anareo, ny zavatra toherinareo ety an-tany dia hatrehin'ny hery any an-danitra: ary na inona na inona avelanareo ety an-tany dia ho tanteraka anie izany araka ny planin'Andriamanitra any an-danitra.6
Aza matahotra intsony fa minoa. Ny zavatra rehetra dia hain'ny mino atao.7
FAHARETANA, FAMINDRAM-PO ARY FAMELAN-KELOKA
Rehefa kely ny heloka navela dia kely koa ny fitiavana havaly.1
Misy lehilahy iray izay nandinika ny kaontim-bolan'ny olom-pantany anankiroa izay nindrana vola taminy. Ny iray nanànany farantsa volamena diman-jato, ary ny iray kosa dimam-polo. Satria fantany fa samy tsy manana hamerenana izy roa lahy ireo,dia nangoraka izy ka namela ny trosan'izy roa lahy. Iza amin'ireo lehilahy roa ireo no heverinareo fa nampiseho fankasitrahana azy be indrindra?2
Sahala amin'izany koa, tonga ny fotoana handinihan'ny mpanjaka iray ny tatitra nomena azy sy ny kaontim-bolany.Teo am-panaovana izany izy no nentina teo anatrehany ny iray amin'ireo mpanompony izay nanànany vola tsy toko tsy forohana mitentina farantsa volamena iray alina!
Satria tsy afaka ny hanefa trosa toy izany ilay mpanompo, dia nijery ny lalàna ilay mpanjaka: voalaza fa ny olona ananana vola sy ny ankohonany dia hamidy ho andevo, ary ny tranony sy ny fananany dia ho raisina atao lavanty amin'ny olona rehetra.
Nandohalika tamin'ny alahelo teo anatrehan'ny mpanjaka ilay mpanompo sady nitomany hoe: "Tompoko sy Mpanjakako ô, miangavy anao aho mba hanana faharetana amiko, fa aloako aminao izy rehetra."
Tohina mafy ilay mpanjaka ka namela ilay trosa, ary navelany nandeha malalaka ilay mpanompo.
Teny an-dàlana mody, nifanena tamin'ny namany izay nanànany vola madinika vitsivitsy ilay mpanompo teo. Tsy mba nampiseho famindram-po izy kanefa fa noraisiny tamin'ny vozony ilay namany sady nanomboka nitrerona izy hoe: "Avereno ny vola nindramaminao tamiko."
Niantoraka teo an-tongony ilay namany sady nitalaho hoe: "Azafady indrindra anie mba mahareta amiko fa aloako daholo na hatramin'ny iraim-bilanja aza."
Fa angaha nihaino izany ilay mpanompo, fa nasainy natsipy tany an-trano maizina ilay rangahy mandra-pandoany ny trosany rehetra araky ny lalàna.
Sendra nahita ny zavatra nitranga teo ny sasany amin'ny mpanompon'ny mpanjaka ka nitatitra izany tany amin'ny rova.
Naniraka niantso an'ilay mpanompo ny mpanjaka ary nilaza taminy hoe: " Hianao ity dia mpanompo ratsy fanahy. Navelako ny trosa tsy voaloanao satria izany no nangatahinao tamiko. Tsy mba afaka namindra fo tamin'ilay namanao izay nanànanao vola tsy misy dikany sahala amin'izany ve hianao?"
Rehefa nilaza izany izy dia natolotr'ilay mpanjaka tamin'ny mpiandry trano maizina ilay mpanompo ary nomeny baiko ireo mba hanidy azy mandra-pandoany ny trosany rehetra.
Sahala amin'izany no hitsaran'ny Ray any an-danitra anareo, raha mandà ny hamela ny heloky ny rahalahinareo sy ny anabavinareo avy amin'ny halalin'ny fonareo hianareo.3
Aoka hianareo tsy ho vonona ny hamela impito ihany, fa impito amby fito-polo. Mihavàna na dia amin'ny fahavalonareo aza. Tsy hitondra anareo afa tsy amin'ny fasahiranana lehibe kokoa ny fiadiana lava: fitorina, fitsarana, ary angamba fandehanana any an-trano maizina, ary tsy misy làlana amahana ilay fanamelohana afa tsy amin'ny fanefana ny sazinareo.4
Tadidinareo ve ilay fitenenana hoe: Maso solon'ny maso, ary nify solon'ny nify? Ny mifanohitra amin'izany no lazaiko. Raha misy mamely tehamaina anareo amin'ny takolakareo ankavanana, atolory azy koa ny ankavia; na raha misy mitory anareo ka maka ny palitaonareo, atolory ho azy koa ilay lobaka eny an-koditrareo. Raha misy olona mampandeha anareo maily iray, maneke handeha roa. Manomeza maimaim-poana ho an'ireo izay mangataka aminareo, ary aza mba mody marenina mihitsy amin'izay manatona anareo ao anaty fasahiranany.5
Rehefa mitsangana eo amin'ny fitoerana fanaovana vavaka fitsaohana hianareo, ataovy amin'ny fo feno famelan-keloka izany, tahaka ny nanoloran'ny Ray any an-danitra famelan-keloka ho anareo. Ary raha hitondra fanatitra amin'ny toerana fivavahana hianareo, ka eo hianareo vao mahatsiaro fa nisy fifandirana tsy voalamina taminareo sy ilay olona iray, avelao eo amin'ny alitara ny fanatitrareo. Mandehana aloha mihavana amin'izany olona izany, avy eo miverena ary atolory ny fanatitrareo. Raha misy rahalahy manisy ratsy anareo, mandehana miresaka aminy momba izany mangingina. Raha mihaino anao izy dia nahazo namana hianareo.6
Tadiavo ny famelan-keloka amin'ny heloka nataon'ny olona taminareo fa hitobaka amin'ny fiainanareo ny famindrampo sy ny fahasoavana.7
NY AMIN'NY FIAINANA MAMOA VOA
Amin'ny voa izay mitombo amin'ny fiainany no halalanareo ny olona.1
Hianareo no siran'ny tany. Kanefa raha ny sira no nanary ny fahafahany hanadio, hanome tsiro sy hitahiry, ahoana no anaovana azy sira indray? Tsy misy ilaina azy, afa -tsy ny hariana sy hitsahana ambany faladia.
Hianareo ve mioty voaloboka amin'ny tsilo, na voan'aviavy amin'ny songosongo? Tsy afaka mamoa voa tsy salama ny hazo salama tsara iray; ary ny hazo lo koa tsy afaka mamoa voa salama. Sahala amin'izany koa ny hazo tsara rehetra dia mamokatra voa tsara, ary ny hazo lo rehetra mamokatra voa lo. Ny hazo rehetra izay mamoa voa lo dia tapahina ary ampiasaina hanaovana hazo ampirehetana afo.
Amin'ny voa eo amin' ny fiainan'ny olona, no hafantaranareo ny karazam-piainana nofidiny hiainana.2
Indray mandeha izay, nisy olona namboly aviavy tao anatin'ny tanim-boalobony. Niandry izy nandritry ny telo taona ny hamoazan'izany kanjo tsy nisy. Farany izao no nolazainy tamin' ilay lehibe mpikarakara ny sahany: "Telo taona aho izao no tonga teto, isan-taona manantena hahita voa amin'ity aviavy ity; kanefa mbola tsy mamoa foana izy. Nahoana ary izy io no tokony hibahana be eo amin'ny taniko? Tapaho any io."
Fa namaly ilay mpikarakara ny saha hoe: "Avelao taona iray indray izy, mandra-pahafahako mihady manodidina azy sy manisy zezika azy bebe kokoa. Angamba izy hamoa amin'izay; raha tsy izany, dia marina ny anao ny amin'ny hikapana azy."3
Rehefa mamoa voa ny fiainanareo dia omen-boninahitra ny Ray, ary tena mpianatro hianareo. Satria ny olona tsara dia mamoaka ny tsara avy amin'ny tsara izay voatahiry ao anatiny; fa ny olona ratsy kosa, avy amin'ny ratsy ao anatiny no amoahany fiainana poak' aty sady tsy misy voany.4
Nisy mpamboly iray izay nankany an-tsaha hamafy. Raha namafy izy, latsaka tamin'ny sisin-dàlana ny voa sasany; tonga nitangorona teo ny vorona ka nohaniny ilay izy. Nianjera tamin'ny toerana be karaobato izay tsy misy tany loatra ny sasany amin'ilay voa. Naniry haingana teo amin'ilay tany marivo izy; kanefa, satria tsy lalim-paka, dia nodoran'ny masoandro ka maina. Nianjera tany amin'ny lobolobo tsilo ny sasany amin'ilay voa; naniry ny tsilo ka nanempotra azy.
Fa nianjera tamin'ny tany tsara kosa ny sasany amin'ilay voa, ary nanonitra ny voa very ireo, namokatra vokatra tsara; ny sasany nitombo zato heny, ny sasany enim-polo, ary ny sasany telo-polo.
Rehefa mandre ny tenin'ny fanjakana ny olona iray ka tsy mahazo azy , dia tonga ny fahavalo ka mangalatra ny voa izay nambolena tao anatin'ny fony. Izay ny amin'ilay voa latsaka teny amin'ny sisin'ny arabe.
Ny voa izay naparitaka teny amin'ny tany misy karaobato indray, dia manambara ireo izay mandre ny tenin'Andriamanitra, ary liana mandray azy, kanefa tsy misy fakany amin'ny fandresehan-dahatra ao anaty. Maharitra fotoana kely ny iainany ilay teny; fa rehefa tonga ny korontana na ny fanenjehana vokatry ny fanapahany hevitra hanaraka ny tenin'ny fahamarinana, manjary ketraka izy ka mitsoaka.
Ny voa izay nafafy tamin'ny tsilo dia milaza ireo izay nandre ny teny, kanefa mamela ny ahiahin'ity izao tontolo izao ity sy ny fitaky ny harena hitambesatra aminy. Voatototra ny teny ka manjary tsy mamoa vokatra ny fiainany.
Ny voa izay nafafy amin'ny tany tsara dia milaza ireo izay mandre ny teny ary mahazo ny hafatra omeny. Hamokatra vokatra be arak'ilay izy ny fiainany: zato, enim-polo, na telo-polo heny ilay tsara nambolena.5
FAHASALAMANA ARY FANASITRANANA HO AN'NY VATANA SY NY FANAHY
Ireo izay salama tsy mila dokotera; fa ireo izay marary no mila.1
Tokony ho azonareo izao: famindrampo no iriko, fa tsy fanatitra. Fa tsy tonga hiantso ny marina Aho, fa ny mpanota ho amin'ny fibebahana. Tsy tokony afahana ve ny marary amin'ny vatany izay nafatotry ny devoly?2
Mora kokoa ve ny milaza hoe: "Voavela ny helokao," sa, " Mitsangàna ary aoka hianao ho sitrana"?
Mha hahalalanareo, tsy misy aloky ny fisalasalana akory amin'izany, fa ny Zanak'Olona manana fahefana ety an-tany hamela heloka, hoy Izaho amin'ilay marary hoe: "Mitsangana! Mahereza; voavela ny helokao. Mandehana tohizo ny lalànao; tahaka ny ninoanao no ho raisinao. Ny finoanao no nahasitrana anao!4
Mpiandry ondry iza no manana ondry zato ka very ny iray, no tsy handao ny sivy amby sivy folo miraoka ahitra tsy manana ahiahy, ary handeha hitady ilay iray izay very? Rehefa hitany ilay ondry very, tsy hasampiny eo an-tsorony ve izany, ny fony feno fifaliana? Amin'ny lalàna mody hiantso ny namany sy ny mpifanolo-body rindrina aminy izy hilaza hoe: "Mifalia miaraka amiko. Efa hitako ilay ondriko very."
Lazaiko anareo izany tantara izany: misy fifaliana lehibe kokoa any an-danitra ny amin'ny olona iray izay mibebaka, noho ny amin'ny olona sivy amby sivy folo izay tsy mila fibebahana.4
Iza aminareo, raha manana farantsa volafotsy folo ka very ny iray, no tsy mampirehitra labozia, ka mitandrina tsara mamafa trano mitady azy mandra-pahitany azy?
Rehefa farany hitanao izy, dia antsoinao ny namanao sy mpifanolo-body rindrina hiaraka, sady izao no holazainao: Mifalia miaraka amiko; fa efa hitako ilay farantsa very.
Sahala amin'izany koa, lazaiko aminareo, misy fifaliana lehibe eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota, na dia iray ihany aza mibebaka.5
IREO FAMPIANARANA LEHIBE
Ny Fampianarana Vaovao 1,2. Matio 7:24-27, 3. Lioka 18:10-14,16,17, 4. Jaona 7:17,16, 5. Jaona 4:21-24; Lioka 19:40, 6. Matio 12:3-12; Jaona 7:23,24, 7. Jaona 9:39
Ny Fitahiana 1,2. Lioka 11:28; Matio 24:46, 3. Matio 5:3-12, 4. Jaona 20:29; Matio 13:16, 5. Matio 25:34
Ny Herin'ny Vavaka 1. Jaona 16:24, 2. Lioka 11:5-10, 3. Lioka 18:2-8, 4. Matio 6:7,8, 5. Matio 21:13; Isaia 56:7, 6. Matio 6:6; Marka 11:24; Jaona 15:16,7
Ny Harena Any an-Danitra 1. Lioka 6:31, 2. Lioka 16:19-31, 3. Lioka 6:34,30, 4. Marka 12:43,44, 5. Marka 10:24,25,27, 6. Matio 6:19-21, 7. Matio 6:1,2, 8. Matio 6:3,4, 9. Lioka 6:38, 10. Lioka 12:16-21; Matio 16:26
Finoana Mahafindra Tendrombohitra 1. Matio 9:29, 2. Matio 8:11,12, 3. Matio 18:19,20, 4. Marka 16:17,18, 5. Matio 17:20; Marka 11:24, 6. Matio 18:18, 7. Marka 5:36; 9:23
Faharetana Famindram-po ary Famelan-keloka 1. Lioka 7:47, 2. Lioka 7:41,42, 3. Matio 18:23-35, 4. Matio 18:22; 5:25, 5. Matio 5:38-42, 6. Marka 11:25; 5:23,24, 7. Matio 6:14
Ny Amin'ny Fiainana Mamoa Voa 1. Matio 7:16, 2. Matio 5:13; 7:17-20, 3. Lioka 13:6-9, 4. Jaona 15:8; Matio 12:35, 5. Matio 13:3-8, 18-23
Fahasalamana ary Fanasitranana Ho an'ny Vatana sy ny Fanahy 1,2. Matio 9:12,13; Hosea 6:6; Lioka 13:16, 3. Matio 9:5; 6:2; 8:13; Lioka 8:48, 4. Lioka 15:4-7, 5. Lioka 15:8-10